पर्यटकको पर्खाइमा ॐ कारेश्वोर महादेव गुफा (भिडियो)
श्री ॐ कारेश्वोर महादेव गुफा तथा मन्दिर परिसर पोखरा महानगरपलिका वडा १७ मा पर्दछ । यो ठाउँमा प्रकृतिक छ्टा ले भरिएको मनमोहक द्रिश्य देख्न सकिन्छ । आफ्नो छुट्टै पहिचान र इतिहास बोकेको यो ठाउँ पर्चार पर्सार को अभावमा पोखरा को सुगम स्थानमा रहदा पनि पर्यटक कुरेरै बसेको छ । श्री ॐ कारेश्वोर महादेव गुफा ब्यबस्थापना समितीका अध्यक्ष भगवान पन्त सँग को कुराकानीमा आधारित भिडियो रिपोर्ट । https://www.youtube.com/watch?v=H7Re5ab8S38 पुरा पढौ
पोनस्टारबाट भूतस्टार बन्दै सन्नी लियोनी
केही समययता बलिउड फिल्ममा ‘हरर कमेडी’को रंग छाएको छ। यसै क्रममा पोनफिल्मबाट चर्चामा आएकी अभिनेत्री सन्नी लियोनी पनि हरर फिल्ममा देखिने भएकी छन्। पहिलो पटक हरर फिल्ममार्फत उनी मुख्य भूमिकामा देखिन लागेकी हुन्। साथै, उनको भूमिका ‘भूत’को रहने छ। पछिल्लो जानकारीअनुसार फिल्मको नाम ‘कोका कोला’ राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। फिल्मका निर्माता महिन्द्रा धारीवाल हुन्। फिल्मको सुटिङ जुनदेखि सुरु हुने बताइएको छ। जिस्म २ बाट बलिउडमा पाइला टेकेकी सन्नीले ज्याकपट,… पुरा पढौ
जेठमै दयाहाङका तीन फिल्म
अभिनेता दयाहाङका यस नयाँ वर्षको जेठ महिनामा तीन वटा फिल्म प्रदर्शनमा आउन लागेका छन् । जेठ ३ मा जात्रै जात्रा, जेठ १० मा दयारानी र जेठ २४ मा आप्पा प्रदर्शनको डेट कुरेर बसेका छन् । करीब ७ वर्ष अगाडि प्रदर्शनमा आएको फिल्म लुटपछि अभिनेता दयाहाङले नेपाली फिल्ममा केही वर्ष राम्रै चर्चा कमाउन सफल भए । त्यसअघि उनले साना तिना रोल गरेरै आफ्नो फिल्म करिअर जेनतेन अगाडि बढाइरहेका थिए । लुट’… पुरा पढौ
१२ बर्ष अगाडि निर्माण भएको चलचित्र ‘खलनायक’को सिक्वेल बन्ने भएको छ । निर्माता रोज राणाले यसको सिक्वेल ‘खलनायक २’ बनाउने घोषणा गरेका हुन । ऋषि न्यौपानले निर्देशन गरेको ‘खलनायक’को अब बन्ने सिक्वेलको निर्देशकमा ‘रणवीर’ निर्देशक गोविन्द सिंह भण्डारी छानिएका छन् । फिल्मका लागि निर्देशकको अलवा द्धन्द्धमा एनबि महर्जन समेत फाइनल भएको निर्माता रोज राणले बताए । फिल्मको लेखन मौनता श्रेष्ठले गरिरहेकी छन् । अभिनेता राजेश हमाल, विराज भट्ट र निखिल… पुरा पढौ
महाभारत युद्धको कारक दुर्योधन हुन् । दुर्योधनका धेरै गल्तीका कारण महाभारत युद्ध भएको थियो । सो युद्धमा पुरै कौरव वंशको समाप्त भयो । महाभारतसँग जोडिएको एक प्रचलित कथाका अनुसार जब युद्ध समाप्त भयो । दुर्योधनलाई भीमले पराजित गरे तब उनि जमीनमा लडेर औला देखाएर केहि भन्ने प्रयास गरिरहेका थिए । दुर्योधन निकै घायल भएका थिए । त्यसैले उनि केहि बोल्न सकि रहेका थिएनन् । यो देखेर भगवान श्रीकृष्ण उनि भएको… पुरा पढौ
१ तिमी मात्रै दुखी छैनौ धेरै दुखी छन यहाँ तिमी मात्रै बेखुशी छैनौ धेरै बेखुशी छन यहाँ । थकित बटुवाले उजाड चौतारीमा बास बसेकै हुन्छ सुख्खा आखाबाट नपत्याउदो गरि आसु खसेकै हुन्छ तिमी मात्रै बेहोशी छैनौ धेरै बेहोशी छन यहाँ तिमी मात्रै बेखुशी छैनौ धेरै बेखुशी छन यहाँ । सगालेर राखेको हासो कतै जोगिन्छ त कतै पोखिन्छ जिन्दगीको यात्रा पनि कतै ठोकिन्छ त कहि रोकिन्छ कोहि असजिलो छन भने कोहि… पुरा पढौ
नमस्ते गर्नु, मन्दिरमा घण्टी बजाउनु र भुइँमा बसेर खाना खानुको वैज्ञानिक कारण के हो ?
हाम्रो समाजमा कैयौं प्रकारको परम्परा र मान्यताहरु रहेका छन् । जसको पछि वैज्ञानिक कारण समेत रहेको छ । यस लेखमा हामी पूर्वीय समाजको परम्पराको पछि जोडिएको वैज्ञानिक कारणहरुको बारेमा उल्लेख गर्ने गरेका छौं । नमस्ते गर्नु धर्म संस्कृतिमा कुनै पनि शिष्टाचारको पछि एक वैज्ञानिक कारण समेत रहेको छ । दुबै हातलाई साथमा जोड्दा हातको औंलाहरुमाथि जोड पर्दछ । जसले एक प्रकारको एक्यूप्रेशरको दबाव हुन्छ । जसबाट हाम्रो दिमाग, कान र… पुरा पढौ
दीपकले छाने जोडी !
नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा सर्वाधिक कलेक्सन गर्ने फिल्मको रेकर्ड बनाएर चर्चामा आएका दिपक राज गिरी र दीपा श्री निरौलाले बाहिरि व्यानरसंगको सहकार्यमा फिल्म निर्माण गर्देछन् । ६ एकान ६ माफर्त फिल्म निर्माणमा हात हालेका यी दुईले हाललाई छक्का पञ्जाको सिरिजलाई रोक्दै गाजुल फेम निर्माता रोहित अधिकारीसंग मिलेर फिल्म निर्माण गर्देछन् । फिल्मको नाम हो “छ माया छपक्कै” । यस फिल्मको घोषणा भएलगत्तै फिल्ममा दिपककी नायिकाको को होलिन् भनेर खुबै चर्चा भयो… पुरा पढौ
फिल्म निर्देशक रामगोपाल बर्मा पक्राउ
भारतका चर्चित फिल्म निर्देशक रामगोपाल बर्मा पक्राउ परेका छन् । फिल्म ‘लक्ष्मीज एनटीआर’बारे पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका उनलाई आन्ध्र प्रदेशको विजयवाडा पुलिसले फिल्मका प्रोड्युसरलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । ‘लक्ष्मीज एनटीआर’ पछिल्लो दुई महिनादेखि विवादमा छ । यसको मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ । आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्टले प्रदशेमा चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ तर, तेलंगाना लगायतका अन्य स्थानमा प्रदर्शन भएको छ । पुरा पढौ
निर्देशक झरना थापाको अर्काे फिल्मको घोषणा
अहिले प्रदर्शनमा रहेको फिल्म (ए मेरो हजुर ३ )को सफलतापछि अभिनेत्री, निर्देशक झरना थापाले अर्को फिल्मको घोषणा गरेकी छन् । यसअघि निर्माण हुने भनेर रोकिएको फिल्म ‘भागवत गीता’ बनाउने घोषणा गरेकी हुन् । झरना यो फिल्म (ए मेरो हजुर ३ ) रिलिजपछि निर्माण गर्ने तयारीमा रहेपनि विभिन्न कारणले केही पछाडि धकलिएको थियो । झरनाले आधिकारिक फेसबुक पेजमा अनमोल र सुहानासँगको एक तश्बिर साझेदार गर्दै अंग्रेजीमा लेखेकी छन्, विथ माई भागवत… पुरा पढौ